Maalinta: Ogast 11, 2019
Wasiirka Gaadiidka Turhan Fariinta Ciidul Fidriga
Waxaan xaqiiqsaneynaa fasax dheeri ah oo qaran oo dadka wax diwaangeliya ay nabad ka dhigaan, xanaaquna waa ay dhammaadaan oo dadku waxay aadaan kuwa ay jecel yihiin. Munaasabadan, Mubarak wuxuu ugu dabaaldegayaa Ciidul Adxaa hambalyada quluubta leh ee dalkeenna, dadkeenna, dunida Islaamka iyo dhammaan aadanaha. [More ...]
Akhbaarta wanaagsan ee Ganacsatada Basaska Dadweynaha ee Sakarya
Bishii Juun, 2019 wuxuu sii wadaa inuu siiyo taageero dakhli bille ah ganacsiyada basaska ee gaarka loo leeyahay ee loogu talagalay safarka bilaashka ah. Macnaha guud, 690 kun oo TL taageero ah ayaa lagu shubay akoonnada ganacsiga. Gaadiidka Dawlada Hoose ee Sakarya [More ...]
Iyada oo la raacayo go'aankii ay qaateen Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbuul kalfadhigii ugu dambeeyay ka hor fasaxa, shaqooyinka waxaa lagu dhammeystirey baarkin dhigga baska Bayrampaşa, oo loo beddelay İSPARK. Guryaha qadiimka ah ayaa laga saaray kuwa cusubna waa la badalay. Jardiinooyin hoosaad ku yaal boosteejada baska oo aan looga gudbin wasaqda, kooxaha İSTAÇ [More ...]
Büyükakın si Yaxya Qabsato Tram Sharaxaad
Midowga Degmooyinka Marmara iyo Duqa Kocaeli Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, Izmit Yahya Captain Ahmet Yavuz Madaxa fulinta, iyo madaxa fulinta fulinta Yuvam Adem Elbaş [More ...]
Maanta ee Taariikhda: 11 August 1930 Zile Beaver Line
Maanta taariikhda 11 Agoosto 1930 khadka tareenka ee Zile Beaver (61 km) ayaa la furay. Nuri Demirağ wuxuu ahaa qandaraaslaha. 11 August 1934 Yolçatı Elazığ (24 km) khadka ayaa la furay. Sweden - Danmark Grb. Oo isna wuxuu sameeyey.